အတတ်ပညာ တရုတ်နိုင်ငံ အရွယ်အစား 160 – 315 မီလီမီတာ ပိုက်လိုင်းအတွက် တာရှည် အလုပ်လုပ်နိုင်သော အလိုအလျောက် ဂဟေဆော်စက် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
1. Butt fusion welding ကို အလိုအလျောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
2. CNC160၊ CNC250၊ CNC315
3. အပူပေးပန်းကန်၏ interrated စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ယူမှု
4. ဂဟေများအတွက် HDPE ပိုက်များ
အလိုအလျောက် Buff Fusion စက်
ပိုက်လိုင်းပိုက်များအတွက် အရွယ်အစား 160 - 315 မီလီမီတာ အလိုအလျောက် ဂဟေဆော်စက်
Butt fusion welding ကို CNC စနစ်ဖြင့် အလိုအလျောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။၎င်းသည် အော်ပရေတာကြောင့် အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်ချေကို ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်သည်။၎င်းကို ဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။အပူပေးပန်းကန်ပြားကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူခြင်းဖြင့် SA၊အပူပန်းကန်၏ပေါင်းစပ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ယူမှုနှင့်အတူ FA ။
မော်ဒယ် CNC 160 CNC 250 CNC 315
လုပ်ငန်းအကွာအဝေး(mm) 63-160 မီလီမီတာ 90-250 မီလီမီတာ 90-315mm
အတိုင်းအတာများ 600*400*410mm 960*845*1450mm 1090*995*1450mm
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 220VAC- 50/60HZ
အလေးချိန်ထိန်းယူနစ် 30 ကီလိုဂရမ် 30 ကီလိုဂရမ် ၃၆ ကီလိုဂရမ်
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 2600W 3950W 4950W
ဂီယာအိတ်တွင် လွန်ကဲသော အလုပ်ဆိုဒ်၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို ခုခံနိုင်သည့် ကျစ်လစ်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ပလပ်စတစ်ဘူးဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။စစ်ရေး အမျိုးအစား ပလပ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှုများကို အထူးအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘောင်တစ်ခုသည် အသုံးအများဆုံးဂဟေစံချိန်စံညွှန်းများ (ISO၊ GIS၊ DVS နှင့် အခြား) ကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
စံနှင့် ပိုက်အချင်း/SDR ၏ မည်သူ့ကိုမဆို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ ဂဟေဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (ဖိအား၊ အချိန်၊ အပူချိန်) အားလုံးကို စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း အလိုအလျောက် တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။အထက်ဖော်ပြပါ စံနှုန်းများတွင် ရွေးချယ်ထားသော ဂဟေဆော်သည့်စက်ဝန်းတွင် မပါဝင်ပါက၊ ဂဟေဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (အချင်း၊ SDR၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ဂဟေဆော်ချိန်နှင့် ဖိအား)တို့ကို စံမုဒ်သို့ဝင်ရောက်ရုံဖြင့် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် စံသတ်မှတ်ချက်ပြင်ပသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်၊ စက်သည် ဂဟေဆော်စက်ဝန်း၏ အဆင့်အားလုံးကို အလိုအလျောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
1.ကြိုတင်တင်ထားသော အဓိကဂဟေစံချိန်စံညွှန်းများ (DVS၊ TSG D2002-2006 နှင့် အခြားအရာများ) သည် ဂဟေကန့်သတ်ချက်များကို အပြည့်အ၀မှတ်တမ်းတင်သည်၊ ဂဟေဆော်ခြင်းမှတ်တမ်းသည် လိမ်ညာခြင်းမရှိပါ။
2. ဂဟေဆော်ခြင်းဒေတာကို ပုံနှိပ်နိုင်ပြီး wifi မှတစ်ဆင့် အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
3. ခြေရာခံနိုင်မှု ရွေးချယ်မှု- အနေအထား၊ ပစ္စည်း၊ ရက်စွဲ၊ အော်ပရေတာ၊ ဂဟေဆက်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်နှင့် အခြားအရာများ
4. တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး၊ တာရှည်အလုပ်လုပ်သောသက်တမ်း၊ စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
5. ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အသစ်၊ GPS တည်နေရာ၊ ကတ်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုစနစ်ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အရည်အသွေးကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ပါ။
6.4ကုပ်နံပါတ်သည် ချထားသောလည်ပတ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် စက်နှင့် ခွဲထုတ်ထားပြီး တီရှပ်တပ်ဆင်မှု၊ တံတောင်ဆစ်အနားကွပ်၊
7. အပူပေးပန်းကန်ပြားသည် အလိုအလျောက် ပေါ်လာသည်၊ အလိုအလျောက် လည်ပတ်မှု မရှိဘဲ၊ လည်ပတ်မှု အဆင့်ကို လျှော့ချသည်၊ အလိုအလျောက် စနစ်အဆင့်ကို တိုးစေသည်
CNC စီးရီး Stand Composition
စက်ကိုယ်ထည်၊ ကြိတ်စက်၊ အပူပေးပန်းကန်၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်၊ ပံ့ပိုးမှု၊ ကိရိယာအိတ်။ ကလစ် 63,90,110,160,200,250,315mm။
တစ်ခုတည်းသောကုပ်များ၊ တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုအရွယ်အစား၊ ပိုက်လိုင်းချိန်ညှိမှုလုပ်ဆောင်မှုအချိန်ကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်၊ ဂဟေဆက်ခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်
Butt Fusion ဂဟေဆော်ခြင်း။
အရွယ်အစားကြီးမားသော Butt Fusion ဂဟေဆော်စက် 380V/415...
ရွေးချယ်နိုင်သော Butt Fusion Weldin ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အပိုင်း ၄ ခု
ကြီးမားသောအရွယ်အစား 1200 မီလီမီတာ ပိုက်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ ဟိုက်ဒရောလစ် ဂဟေ...